Qarax Waddah Attar Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Qarax Waddah Attar Forex Tusiyaha
Qarax Waddah Attar Forex Tusiyaha
Qarax Waddah Attar Forex Tusiyaha waxaa barnaamijkii by Waddah Attar, ganacsade ah in dunida Carabta. Tilmaamahan waa adag xoogaa in la isticmaalo iyo waxay u baahan fiirsashada qaar ka mid ah, laakiin waa taam aad u wanaagsan gaar ahaan bilowga ah.
tilmaame waa ku haboon yahay ganacsatada intraday iyo sidoo kale scalpers. Laakiin si ay u isticmaalaan in scalping, waxaad yeelan doontaa in ay isticmaalaan qaab dhismeedka hoose / adag waqti. Waxaa la qorsheeyay in la ogaado oo tilmaamaya xitaa isbedel yar in dhaqankan cusub ee suuqa.
Inkasta oo adag, tilmaame this leedahay oolnimada aad u dheer ku dhawaad 90%. Waa tilmaame in aad ku dul ganacsiga aamini karaan. Si kastaba ha ahaatee, aad leedahay si aad hore ee shaxda 24 saacadood ama iyada oo loo marayo soo baxay ka dib markii meel amar tan iyo calaamadaha isbedelka ay aad u jir- jeer qaar ka mid ah.
Fahamka sida tilmaame this shuqullada.
Tilmaamahan waxaa soo bandhigay shaxda gaar ah oo waxaa la salaysan ee MACD iyo guutooyin. MACD The run ahaantii waa mid ka mid ah ayaa mas'uul ka ah histogaraam la sameeyay halka guutooyin ah ayaa mas'uul ka ah khadka dhaqdhaqaaqa weheliyaan shaxda tilmaanta.
histogaraam ah in la aasaasay shaxda tilmaanta, ka kooban of baararka cagaaran, iyo kuwo gaduud ah meelaha kala duwan. height ee ulaha gudban ka waxaa lagu cabbiraa ka line a eber kor.
By default qiyaasta toosan ee tilmaame waxaa loo dhigay si ay u bilaabaan ka eber. Si kastaba ha ahaatee, ma waxay leeyihiin xad si height ugu wada sarreeyey in ka gaari karin. Heerka sare ee gooldhalinta qiyaasta toosan ku xiran tahay height ee gudban in loo sameeyay. Mid kasta oo ka ulaha gudban ka sameeyey shaxda tilmaanta u dhigmaan laambad shaxda ugu weyn ee ganacsiga.
The baararka cas loo sameeyay marka uu jiro isbedel hoos u dhaca qiimaha suuqa halka qataarrada cagaaran waxaa laga sameeyay marka ay jirto uptrend ah qiimaha suuqa. height ee ulaha gudban ka muujinaysaa mugga laambadda kasta oo halkan xoogga ciidammada ee waxaa riixaya qiimaha suuqa jihada in ay u guurayso.
lagugu tuday sawirka.1. Isticmaalka tilmaanta Qarax Waddah Attar ganacsiga.
Tusaale ahaan, haddii dhererka qataarrada cas waa waqti aad u dheer, waxa uu muujinayaa in ay arrimuhu hoos waa xoog badan oo la mid ah waxay khusaysaa qataarrada cagaaran.
sienna line The midab in lagu sawiray shaxda tilmaamayaasha waxay kaloo ka caawisaa in muujinaya xoogga arrimuhu suuqa ee hadda sida lagu sawiray histogaraam ah. Marka xoog yahay sare, line ka muuqdaan doonaa si ay u sameeyaan qaab Cadaab iyadoo ay sabab u dhaqaaqin kor iyo hoos marka xoogga isbeddel hoos u dhaco.
Isticmaalka Qarax Waddah Attar ganacsiga.
Waxaa jira qaar ka mid ah xeerarka in aad leedahay si ay u hoggaansamaan marka ay la tilmaanta Qarax Waddah Attar Ganacsi. sharciyada waxaa ka mid ah:
Waxaad si ay u meel si marka dhererka baararka tilmaanta (baararka shaxda tilmaanta) waa kor ku khadka Sienna midab leh.
Iibso amarada waxaa la geeyaa marka bar cagaaran ahbaa.
amarada Iibiya waxaa lagu soo bandhigaa markii bar cas ahbaa.
Trading waa in la koobna bar labaad waxaa la aasaasay shaxda tilmaamayaasha ka dib markii midabka ah ee isbedelka qataarrada.
Marka Ganacsi waxaad go'aansan kartaa in ay isticmaalaan heerka stop ama aad go'aan ku gaadhi kartaa in la xiro amar marka signal ah ka soo hor jeedda waxaa la siiyaa; waxay ku xiran tahay sida aad rabto in aad ku ganacsan.
Waddah Attar Qarax Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Qarax Waddah Attar Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Qarax Waddah Attar Forex Indicator.mq4?
Download Waddah Attar Qarax Forex Indicator.mq4
Copy Waddah Attar Qarax Forex Indicator.mq4 aad Metatrader Directory / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on Qarax Waddah Attar Forex Indicator.mq4
Tusiyaha Waddah Attar Qarax Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Qarax Waddah Attar Forex Indicator.mq4 4 Chart?
Waddah Attar Qarax
article PreviousSaadaasha Forex Tusiyaha
Next articleSearch Qaababka v6 Forex Tusiyaha